पिसिआर रिपोर्ट नहुँदा फेरिएको मजदुरको यात्रा – AayoMail
पिसिआर रिपोर्ट नहुँदा फेरिएको मजदुरको यात्रा
आयाेमेल संवाददाता २०७७ असोज १७ गते ८:४४
घरमा दुई छोराछोरी र श्रीमती छन्। काम खोज्न नारायण थापा उनीहरुलाई छोडेर म्याग्दी हिँडे।
उनीसँगै गाउँका अरु आठ दाजुभाइले बर्दिया छोडेका चार दिन भइसक्यो। तर, पिसिआर रिपोर्ट नहुँदा आँखै अघिको गन्तव्य टेक्न पाएनन्।
म्याग्दी–पर्वत समाबाट यो टोली पोखरा फर्किनुप-यो। झन्डै ९२ किलोमिटरको यात्रा गरेर जुन बाटो उनीहरु म्याग्दी–पर्वत नाका पुगेका थिए, असोज १४ गते त्यही बाटो पोखरा आइपुगे।
पिसिआर जाँच गराउन बिहीबार म्याग्दीबाट पोखरा फर्किएका दाजुभाइ शुक्रबार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा भेटिए। कोरोना परीक्षण गराउन १० बजे पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल छिरेका रहेछन्।
परीक्षणलाई दुई हजार रुपैयाँ बुझाएपछि स्वाब दिने पर्खाइमा थिए। पोखरामा अन्त जाने ठाउँ कतै थिएन। कोरोना प्रयोगशाला नजिकैको आइसोलेसन छिर्ने ठाउँ अघि बसे। साढे एक बजे अस्पताल पुग्दा उनीहरु स्वाब दिने लाइनमा थिए।
हातमा स्वाब झिक्ने स्टिक थियो। उनीहरुजस्तै अरु पनि स्वाब दिने पर्खाइमा थिए। कसैलाई दुई/तीन दिनमै पोखरा छोड्नु थियो। कसैलाई काममा जानु।
बर्दियाका यी ९ दाजुभाइलाई कोरोना नेगेटिभ भएको रिपोर्ट लिएर मजदुरी गर्न म्याग्दी पुग्नु छ। बर्दियाबाट पोखरा आउन १८ सय रुपैयाँ लाग्यो। पोखराबाट म्याग्दी पुग्न तीन सय ५० खर्चिए। तर यी ९ दाजुभाइ म्याग्दी छिर्नै पाएनन्।
पर्वत र म्याग्दीको सीमामा बसेका प्रहरीले उनीहरुलाई छिर्न दिएनन्। त्यहाँ खटिएका प्रहरीले भने – १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्नु वा पिसिआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट देखाउनु।
अलमलमा परे। छलफल गरे। निक्र्यौल निस्कियो – क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बिताउनुभन्दा कोरोना परीक्षण गरौँ। ‘क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेपछि पनि परीक्षण गर्नु नै पर्छ। बरु छिट्टै नेगेटिभ भएको रिपोर्ट पाए काममा जान पाइन्छ भनेर पोखरा फर्कियौं,’ नारायणले सुनाए।
काम पाइन्छ/पाइँदैन भन्ने थाहा छैन। म्याग्दीको कुन ठाउँ जाने पनि थाहा छैन। गाउँकै साथीले काम पाइन्छ भनेपछि ९ दाजुभाइ म्याग्दी हानिएका हुन्।
‘घरमा बसिराख्नुभन्दा काम गरेको ठिक भनेर आएका हौं। साथीले तातोपानी भन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘आर्थिक स्थितिले पनि सतायो। गाडी खुलेपछि हिँड्यौं।अब काम मिलिगए राम्रो हुन्थ्यो।’
घरमा श्रीमती, १० वर्षकी छोरी र आठ वर्षका छोरा छोडेर आएकानारायणलाई कोरोनाको डर छैन। तर सचेत भने छन्। गोजीमा भएको स्यानिटाइजर झिकेर दलिरहन्छन्।
लकडाउन अघिसम्म उनी गोरखामा भवन ठड्याउने काममा थिए। ११ चैतमा लकडाउन भएपछि १६ चैतमा उनी घर फर्किए। जहाँ काम गर्थे त्यहीँबाट घर पुर्‍याइदिने व्यवस्था भयो। लकडाउन अघिसम्म काम गरेको ठाउँबाट पैसा आएको भए सयौँ डाँडा काटेर म्याग्दी पुग्ने थिएनन्।
नारायणको अनुहारमा प्रष्ट देखिन्थ्यो – मनभित्र पीडा दबिएको छ। उनको अनुहार भाव बोल्छ – के भनौं, के नभनौं। काँधमा परिवारको जिम्मा बोकेका उनी भन्छन्, ‘आफ्नोभन्दा पनि अर्काका लागि बाँच्नु छ। बालबच्चा छन्। एक्लै भए त के हुन्थ्यो र ! उनीहरुलाई पाल्नै भए पनि आउनुपर्‍यो।’
नारायणकै छिमेकी सोमप्रसाद चौधरीको पनि लकडाउन भएपछि काम गुम्यो। पाल्पामा निर्माणको काममा मजदुरी गर्ने उनी पनि घर फर्किए। सात महिना घरमा बसेपछि काम खोज्न थाले।
म्याग्दीमा काम पाइन्छ भनेपछि २९ वर्षका सोमप्रसादले पनि घर छोडे। ‘त्यहाँ छिर्नै दिएन। त्यसैले टेस्ट गर्न आएको। यति लामो लाइन छ। यहीँबाट सर्ने जस्तो…,’ यति भनेपछि उनी रोकिए।
सात जनाको परिवार छोडेर काम खोज्न हिँडेका उनी यो वर्ष चाडपर्वमा घर फर्किने छैनन्। ‘चाडपर्व आउँदै छ। त्यति बेलासम्म दुई/चार पैसा आइहाल्छ कि भनेर आको। पहिला त दसैंतिहार घरमै बसेर मनाइन्थ्यो। यो वर्ष पाइएन,’ उनले सुनाए।
यी ९ दाजुभाइको टोली अस्पताल बाहिरको होटलमा दुई वटा कोठामा बसेको छ। प्रतिदिन एक हजार कोठा भाडा तिरेका उनीहरु कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ भएको देखाएर म्याग्दी छिर्ने आसमा छन्।
नारायण र सोमप्रसादजस्तै एक सयभन्दा बढी कोरोना परीक्षणका लागि दैनिक प्रयोगशाला पुग्ने गरेका छन्।
शुक्रबार एक सय १० जनाको स्वाब संकलन गरिएको प्रयोगशाला प्रमुख डा. मोनी सुवेदीले जानकारी दिइन्। ‘सधैं एक सयभन्दा बढी आउनुहुन्छ। दुई/तीन दिन पहिला प्रहरीको भर्ती खुलेकाले अलि बढी हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन्।
कोरोना परीक्षणका लागि अहिले आफूहरुलाई जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताइन्। चार जना कोरोना प्रयोगशालामा खटिएको र परीक्षण गराउन आउनेको संख्या बढिरहेकाले त्यो कम भएको उनले बताइन्।
‘पहिला ४०/५० जना आउँदा ठिकै हुन्थ्यो। अहिले स्वाबको संख्या बढेकाले मेनपावर कम भएको छ। दसैं पनि आउन लाग्यो। अब झन् धेरै हुने होला,’ सुवेदीले भनिन्।
विभिन्न जिल्लाले प्रवेशमा कडाइ गरेपछि कोरोना परीक्षण गराउन आउनेहरु बढेको अस्पतालका सूचना अधिकारी नारायण आचार्यले बताए।
‘म्याग्दी, मुस्ताङतिर पिसिआर नभई छिर्नै नदिने रहेछन्। त्यता जाने शिक्षक, कर्मचारी, मजदुर परीक्षणलाई आउनुभएको छ,’ आचार्यले भने। उनकाअनुसार सरकारले पिसिआर परीक्षणको शुल्क लिन थालेपछि दुई हजार २२ जनाले पैसा तिरेर कोरोना परीक्षण गराएका छन्।